Tag: horonantsary an-tserasera | Martech Zone
Tag: horonantsary an-tserasera
Niasa tamina horonantsary manazava izahay nandritra ny herinandro vitsivitsy lasa izay, ary nandeha tsara tokoa na dia niaraka namorona vondrona talenta dimy aza - ny mpanjifa, ny mpanoratra script, ny mpanao sary, ny animator ary ny feo manoloana ny talenta. Ireo dia faritra mihetsiketsika be dia be! Ny ankabeazan'ny fizotrany dia atolotra amin'ny loharano iray mankany amin'ny iray hafa rehefa mandroso amin'ny alalàn'ny fizotrany isika mba hahasarot izany. Eo anelanelan'ny manokana, voaaro amin'ny teny miafina
Izahay dia nizara infographic tsara tamin'ny torolàlana fanombohana ho an'ny horonan-tsary sosialy, izao misy infographic tsara avy amin'ny The Media Octopus momba ny torohevitra momba ny fampiasana video sosialy ho an'ny marikao. Tsy mbola nisy fotoana tsara kokoa hanaovana marika hampiasana vola amin'ny famoronana sy fizarana atiny izay mahatonga ny olona hihomehy mafy, hiketrika amin'ny fiandrasana na hahatsapa ny volon-damosin'ny vozony. Olly Smith, talen'ny varotra